ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး – My Doctor
You are here:Home-All Articles-မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး-ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး
By tayzar|2019-08-30T15:02:59+00:00August 30th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
မီးဖွားပြီးနောက်ဖြူဖျော့ပြီး အမောဖောက်ခြင်း သားသားမီးမီးလေးတွေမွေးပြီဆိုတာနဲ့ မေမေတို့ခမျာ တစ်နေ့နေ့ဒီကလေးနဲ့ပဲ ချာလည်တွေရိုက်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျ ဂရုမစိုက်ဖြစ်နဲ့။အဲ့လိုမိမိကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ဖြစ်တော့ မဖြစ်သင့်တဲ့ဝေဒနာတွေ၊နာမကျန်းမှုတွေဖြစ်ပြီး လူပင်ပန်းရတတ်ပါတယ်။ဒီအထဲကမှ အဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ မီးဖွားပြီးသွေးအားနည်းတတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုသတိထားရအောင်ပြောပြချင်ပါတယ်။ မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ဖြူဖျော့အားနည်းပြီးအမောဖောက်တာဘာကြောင့်လဲ??? မီးဖွားပြီးနောက်သွေးအားနည်းရောဂါခံစားရတဲ့အခါမှာ ဖြူဖျော့အားနည်းတတ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကနေမှ ပိုဆိုးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ နှလုံးအားနည်း၍အမောဖောက်ခြင်းကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ရောဂါပြင်းထန်လွန်းပါက အသက်သေဆုံးသည်အထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲ??? အောက်ပါအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်- ၁)သံဓါတ်ပြည့်ဝစွာ စားသုံးမှုမရှိခြင်း။ -ကိုယ်ဝန်မရှိစဉ်အချိန်နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အချိန်မှာ သံဓါတ်ကိုပြည့်ဝစွာမစားသုံးပါက မီးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာသွေးအားနည်းရောဂါကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ -ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် တစ်ရက်ကို သံဓါတ်၎.၄မီလီဂရမ်လိုအပ်ပါတယ်။ -ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ သံဓါတ်အားဆေးကိုမဖြစ်မနေသောက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ -အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ကလေးယူတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ သံဓါတ်အားဆေးကိုစတင်သောက်သုံးကြပါတယ်။ ၂)ကလေးမွေးဖွားစဉ်သွေးဆုံးရှုံးမှုများခြင်းကြောင့်သွေးအားနည်းရခြင်း။ -မီးဖွားစဉ်အချိန်မှာ ပျမ်းမျှအနေနဲ့သွေး ၅၀၀မီလီလီတာလောက်ဆုံးရှုံးရလေ့ရှိပါတယ်။ -ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဟာကို သံဓါတ်အားဆေး၊အစာအာဟာရနဲ့ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၃)အခြားအူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ။ -သံဓါတ်စုပ်ယူမှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သော အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများရှိနေခြင်းကလဲ သွေးအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ မီးဖွားပြီးနောက် ဖြူဖျော့အမောဖောက်ခြင်းမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ??? ကလေးမွေးဖွားပြီး သွေးအားနည်းခြင်း၊အမောဖောက်ခြင်းမဖြစ်ရလေအောင် ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်၊ဆောင်နေစဉ်နဲ့မီးဖွားပြီးအချိန်တွေမှာပါ
After Childbirth, wearing the makeup is good or not?
By tayzar|2019-08-16T22:48:34+00:00August 16th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
မီးတွင်းထဲ မိတ်ကပ်လိမ်းလို့ရမရ ဒီတစ်ခေါက်ပြောရမှာတော့ နည်းနည်းဆန်းတယ်။ ခေါင်းစဉ်က မီးတွင်းထဲ(မီးနေသည်)မိတ်ကပ်လိမ်းလို့ ရ/မရ တဲ့။ မိတ်ကပ်လိမ်းလို့ရမရ အရင်မပြောခင်မှာ မီးတွင်းဆိုတာကိုနည်းနည်းပြောရအောင်။ မီးတွင်းဆိုတာ မိခင်တစ်ယောက်ကလေးမွေးဖွားပြီး (၄၅)ရက်အတွင်းကိုခေါ်ပါတယ်။ ကလေးမီးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာ မျက်နှာအသားအရေရဲ့ ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကိုနည်းနည်းပြောပြပါမယ်... ၁)မျက်လုံးအောက်ဟာမို့ဖောင်းလာပြီး အိတ်ကလေးလိုပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ၂)မျက်နှာအသားအရေတွေဟာပိုမိုခြောက်သွေ့လာတတ်ပြီး အသားအရောင်မညီတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၃)ဝက်ခြံ၊တင်းတိပ်တွေလဲ ပိုပိုထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေဘာလို့ပေါ်လာရသလဲဆိုရင် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ၊စိတ်ဖိစီးမှု၊အိပ်ရေးပျက်ခြင်းနဲ့ အသားအရေကိုဂရုစိုက်မှုအားနည်းသွားတာရယ်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စကအရမ်းကိုစိတ်ညစ်ပူပန်ရမယ့်အရာတော့လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အရေပြားထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းတွေကို စနစ်တကျလိုက်နာမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မီးတွင်းထဲ မိတ်ကပ်လိမ်းလို့ ရ/မရ??? ရပါတယ်။ မျက်နှာအသားအရေကိုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့အရေပြားထိန်းသိမ်းပစ္စည်းတွေကို သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှလဲ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း၊မျက်လုံးအောက်တွဲခြင်း၊ဝက်ခြံနဲ့တင်းတိပ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကိုသက်သာစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဟာတွေကို လိမ်းကြမလဲ??? ၁)SPF ပါဝင်မှုမြင့်မားတဲ့ Sun screen
By tayzar|2019-07-02T11:50:27+00:00July 2nd, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
အမျိုးသမီးများနှင့်သံဓါတ် 'သံဓါတ်' လူတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား စကားလုံးလေး။ ဒီနေ့ကတော့ အဲ့သံဓါတ်ဆိုတာရဲ့ အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေး ပြန်နွှေးပေးချင်တာ။ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်အဓိကထားပြောချင်တာပေါ့။ သိကြပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း သံဓါတ်ဟာလူတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓါတ်တစ်မျိုး။ ဘာလို့မရှိမဖြစ်လဲဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲလ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ အာဟာရကိုသယ်ဆောင်ပေးတဲ့ သွေးဆဲလ်လေးတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ၎င်းကမရှိမဖြစ်မို့လို့ပါ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် သံဓါတ်ကဘာလို့အရေးပါတာလဲ??? ယောကျာ်းမိန်းမ မရွေးသံဓါတ်ဟာအရေးပါပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာဘာလို့ပိုပြီးအရေးပေးပြောရသလဲဆိုရင်တော့ ၎င်းတို့ဟာလစဉ်ရာသီလာချိန်မှာသံဓါတ်ဆုံးရှုံးရတာရယ်၊အဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာကို ပြန်ဖြည့်ဖို့လောက်ငှအောင်မစားမိကြတာရယ်ကြောင့် ၎င်းတို့ဟာ သွေးအားနည်းရောဂါကိုပိုမိုခံစားရလေ့ရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဘယ်အချိန်မှာရော သံဓါတ်ကိုပိုဂရုစိုက်စားသုံးပေးရမလဲ??? ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ပါ၊၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မိခင်အတွက်ရော၊သန္ဓေသားကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုမှာပါ သံဓါတ်က အရမ်းအရေးပါလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သံဓါတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ပမာဏပြည့်အောင်မစားရင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ??? သံဓါတ်မပြည့်ဝတဲ့အခါမှာ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ရင်တုန်ခြင်း၊မူးဝေခြင်းစတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ သံဓါတ်နည်းတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေပေါ်လာရင် ဘာလုပ်ရမလဲ??? အထက်ပါရောဂါလက္ခဏာတွေပေါ်လာရင် ဆရာဝန်နှင့်ပြသပြီး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု၊ကုသမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သံဓါတ်ပေါကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေက ဘာတွေလဲ??? သံဓါတ်ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကတော့-
By tayzar|2019-06-27T16:56:26+00:00June 27th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုခံရခြင်း ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရမှုအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ အချို့လဲကြားဖူးပြီးသားဖြစ်သလို အချို့အတွက်လဲ စိမ်းနေမယ့်အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ အနည်းနဲ့အများ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ မိခင်ရောကလေးကို စိတ်ရော၊ကိုယ်ပါထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်သည်များအကြမ်းဖက်မှုခံရခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်အချိန်ထဲကဖြစ်နိုင်သလို၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်(သို့)မီးဖွားပြီးချိန်မှလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ မိခင်ရော မွေးဖွားလာမယ့်ကလေးရဲ့အကျိုးအတွက်ပါ သက်ရောက်မှုများစွာရှိတဲ့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရာ သုတေသနနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းများစွာလိုအပ်နေသေးပေမယ့် ဒီကိစ္စဟာတကယ့်ကိုဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအခံရနိုင်ဆုံးလဲ??? ကိုယ်ဝန်သည်များအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရမှုအခံရနိုင်ဆုံးအချိန်ဟာ ကလေးမွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချို့အချိန်တွေမှာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရမှုဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ဖြစ်တတ်သလို အချို့အခြေအနေတွေမှာကျတော့လဲကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ရပ်သွားတတ်ပါတယ်(အကြမ်းဖက်တဲ့လူဟာ ကလေးကိုထိခိုက်မှာစိုးရိမ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အကြောင်းတရားတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရခြင်းကို ဖြစ်စေသလဲ??? ကိုယ်ဝန်မရှိခင်အချိန်ထဲက အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာလဲ အကြမ်းဖက်ခံရဖို့ရာအများဆုံးဖြစ်ပါသတဲ့။ အခြားအကြောင်းအရာတွေအနေနဲ့ကတော့ အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်အိမ်ထောင်ကျခြင်း၊စီးပွားရေးကျဆင်းခြင်း၊ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ပညာအရည်အချင်းနည်းပါးခြင်း၊အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကဘာတွေလဲ??? အမျိုးသားအဖော်မှ သားဆက်ခြားခြင်းနည်းလမ်းများကိုမလိုက်နာပဲ အတင်းအဓမ္မအတူတူနေခြင်း၊အလိုမတူပဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊သဘောဆန္ဒမပါပဲကိုယ်ဝန်ဆောင်စေခြင်း၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စော်ကားခြင်းနှင့် ကိုယ်ထိလာက်ရောက်စော်ကားခြင်း၊လျစ်လျူရှုခြင်း၊မတရားသဖြင့်ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းတို့ဟာ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကို ကာကွယ်ဖို့ရာအမျိုးသမီးတွေဘာလုပ်လေ့ရှိသလဲ??? အချို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဟာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရခြင်းကိုရှောင်လွှဲနိုင်တယ်လို့ယူဆကြပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့်လဲ
By tayzar|2019-04-03T14:13:01+00:00April 3rd, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
? ဒါတွေရှောင်စို့ ဗိုက်ဗိုက်တို့ ? အိမ်ထောင်မကျခင် ဟိုတုန်းကတော့ အစဉ်တစိုက်ကြွေးကြော်ခဲ့တာ My Body - My Rule ပေါ့။ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ ကိုယ်ကြိုက်သလိုနေ ကြိုက်သလိုစား ကြိုက်သလိုအိပ် ကြိုက်သလို ကစား ကြိုက်သလို ပျော်ပါးခဲ့ရတာပေါ့။ ခုတော့ အဲ့ဒီ့ My body ထဲမှာ နောက်ထပ် Body သေးသေးလေးနဲ့ဘေဘီ ပိစိကွေးလေးတစ်ယောက်ရောက်နေပြီတဲ့။ ဒီတော့လည်း ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်တွေကနေ သူ့စိတ်ကြိုက်တွေ ပြောင်းရတော့မယ်။ My Body - ဘေဘီပိစိကွေး Rules တွေပေါ့။ သူ့စိတ်ကြိုက်ဆိုတာထက် ဘာမှမသိနားမလည်ရှာတဲ့ ကလေးပိစိလေး
Importance of Hygiene in Pregnant women
By tayzar|2019-04-03T14:06:16+00:00April 3rd, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
? ဗိုက်ဗိုက်တို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး? တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးသိပ်ကြီးတဲ့အရာပေါ့။ ရောဂါပိုးမွှားတွေ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် လာမနေကြဖို့ ကာကွယ်ပေးသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ လူတွေကြားမှာနေနိုင်ဖို့လည်း တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကို အမြဲဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ သာမန်လူတွေအတွက်တောင် အရေးကြီးရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်လောင်းတစ်ယောက်အတွက် ပိုအရေးကြီးတော့မပေါ့။ အပြင်မှာ တစ်ကိုယ် ဗိုက်ထဲမှာတစ်ကိုယ်ဆိုတော့ နှစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးလို့တောင် ဆိုရလေမလား။ သန့်ရှင်းရေးကို နှစ်ကိုယ်စာ နှစ်ဆ ပိုလုပ်ရမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခြေခံကျတဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုတွေကို လိုက်နာပေးဖို့ပါပဲ။ မဟုတ်ရင် အပြင်က ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့် ဗိုက်ဗိုက်ထဲက ခန္ဓာကိုယ်ပိစိလေးပါ ဒုက္ခရောက်သွာနိုင်တာကိုး။ ? အသားအရည်နှင့် ဆံပင်သန့်ရှင်းရေး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ အရေပြားပေါ်က
stretch marks in pregnant women
By tayzar|2019-03-04T17:42:19+00:00March 4th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
မေမေတို့နဲ့ ဗိုက်ကြောပြတ်ခြင်း မေမေတို့အားလုံးနီးပါး တွေ့ကြုံရမယ့် ပြဿနာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာ။ ဗိုက်ကြောပြတ်တာဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တိုင်းအတွက်တော့ ပြဿနာကြီးမဆိုသော်ငြားလဲ အချို့မေမေတွေအတွက်တော့ အလှပျက်စရာ၊ရှက်စရာလေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သင်လဲတစ်ချိန်ချိန်မှာ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ စိတ်မညစ်ပါနဲ့၊စိတ်ထဲအရမ်းထည့်ထားပြီးခေါင်းရှုပ်ခံမနေပါနဲ့၊ဒါဟာ မေမေတို့အားလုံးနီးပါးကြုံရမယ့်အရာပါ၊ အချိန်တန်အရှင်းမပျောက်သွားရင်တောင် လျော့သွားမှာဖြစ်သလို၊သက်သာအောင်လဲ လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ ဗိုက်ကြောပြတ်ခြင်း ဘယ်အချိန်မှာ စပေါ်မလဲ? ဟုတ်ကဲ့ ကိုယ်ဝန်သက် ၁၃ပါတ်(၃လ) မှ ၂၁ပါတ်(၅လ) အတွင်းစပေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်မှာပေါ်မလဲ? အယောက် ၁၀၀မှာ ၉၀လောက်ထိပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ပေါ်သလဲ? ပေါ်ချင်လို့ပေါ်ပါတယ်။အလကား စတာပါ။ တကယ်ကိုလဲ သူ့အကြောင်းအရင်းကိုသေချာမသိရပေမယ့် အရပ်ထဲလူပြောများသလိုပါပဲ ဗိုက်ကြောပြတ်လို့ပေါ်တယ်လို့လဲ ယူဆကြပါတယ်။ ဗိုက်ကြောဆိုပေမယ့် တကယ်ကအကြောရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုက်အရေပြားအောက်ကနေပြီး အရေပြားရဲ့တင်းအား(elasticity)ကို ထောက်ပံပေးထားတဲ့ တစ်သျှူး(connective tissues)လေးတွေဟာ ကလေးကြောင့်ဗိုက်ဖောင်းတင်းလာတဲ့ဒဏ်(tension)ကြောင့် ပြတ်ထွက်ပြီး
Mother to foetus infections
By tayzar|2019-02-26T13:40:43+00:00February 26th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
မိခင်​မှတဆင့်​ သ​န္ဓေသားကို ကူးစက်​​ရောဂါများ "လူဖြစ်​ရခြင်းဟာ မိုး​ပေါ်က အပ်​တစ်​​ချောင်းနဲ့ ​မြေပြင်​က အပ်​တစ်​​ချောင်းဆုံဖို့ထက်​ ခက်​တယ်​" လို့ မြတ်​စွာဘုရားက ​ဟော​တော်​မူခဲ့ပါတယ်​... ဒီလို လူဖြစ်လာဖို့ရာ​ကော.. မိခင်​ဝမ်းကြာတိုက်​ထဲမှာ ကိုးလ...​မွေးဖွားလာပါပြီးက ကျန်းမာသန်​စွမ်း​သော က​လေးတစ်​​ယောက်​ ဖြစ်​ဖို့ရာ...စသဖြင့်​ ​အချက်​​ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်​.. "ကံ ကံ၏အကျိုး"ကို လိုက်​ပြီး ​နောင်​ဘဝ ခုဘဝမှာ ခံစားကြရတယ်​လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​​တွေက ယုံကြည်​ကြပါတယ်​..."ကံ = အလုပ်​" လို့လဲ တချို့က ဆိုကြပြန်​တယ်​ ...မည်​သို့ဆို​စေကာမူ တခါတရံမှာ ကိုယ့်​ သိလိုက်​​သော်​ငြား မလုပ်​လိုက်​တာ​တွေ..ဥ​ပေက္ခာပြုလိုက်​တာ​တွေ​ကြောင့်​ ဆိုးဝါးတဲ့ ထိခိုက်​မှု​တွေ.. မဖြစ်​သင့်​တဲ့ အရာ​တွေ ​ပေါ်လာတတ်​သလို ကိုယ်​က ဂရုတစိုက်​လုပ်​တာ​တွေ​ကြောင့်​ ​ကောင်းကျိုးခံစားရတာ​တွေလည်း ရှိပါတယ်​... မတိုး​တက်​​သေး​သော
Those who should not have baby
By tayzar|2019-02-25T10:14:54+00:00February 25th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
ကိုယ်ဝန်မဆောင်သင့်သော အခြေအနေများ အမျိုးသမီးအများစုဟာ မိသားစု အခြေအနေ ၊ သားဆက်ခြားအစီအစဉ် ၊ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး အစရှိတဲ့ အကြောင်းအရာ များစွာပေါ်မူတည်ပြီး သန္ဓေရခြင်းကနေ ကာကွယ်ဖို့ ကိုယ်ဝန်တားနည်းလမ်း မျိုးစုံနဲ့ တားဆီးနေကြပါတယ် ။ တနည်းအားဖြင့် အချိန်ကောင်းမဟုတ်သေးရွေ့ဟုဆိုရမည်ပဲ ဖြစ်သည် ။ ထိုနည်းတူစွာပင် တချို့သော အမျိုးသမီးများတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရမည့် ဒါမှမဟုတ် နှောင့်နေးရမည့် အခြေအနေများ ရှိနေပါတယ် ။ တချို့သော ရောဂါတွေကြောင့် ထိုအမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သော အခါမှာ ရင်သွေးရော မိခင်ပါ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသည်အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုရောဂါ အခြေအနေရှိတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ကိုယ်ဝန်
How exact is USG result in defining gender of foetus
By tayzar|2019-02-20T15:00:37+00:00February 20th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
Ultrasound နှင့် ကိုယ်ဝန် ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မှာ ultrasoundရိုက်တယ်ဆိုတာ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော အရမ်းကိုခေတ်စားနေတဲ့ အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှာလည်း မစိုးရိမ်ရသလို အချိန်လည်းအများကြီးမပေးရတဲ့အတွက် ဆရာဝန်တွေကော မိခင်တွေပါအရမ်းအကြိုက်တွေ့တဲ့ နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ultrasound probeကိုဗိုက်ပေါ်မှာထောက်ပြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိနိင်တဲ့အချက်တွေများကြီးရှိတာကြောင့် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Ultrasoundရိုက်ခြင်းကြောင့် မိမိရဲ့မွေးမဲ့ရက်ကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ last menstrual period (LMP) လို့ခေါ်တဲ့ နောက်ဆုံးရာသီလာတဲ့လရဲ့ ပထမဆုံးရက်ကို အခြေခံပြီးတွက်ထားတဲ့ due dateထက် ultrasound ကပေးတဲ့ due dateကပိုမိုမှန်ကန်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ultrasoundစရိုက်တဲ့အချိန်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အပတ် 20ပတ်မတိုင်ခင်သရိုက်မှသာ LMPကနေတွက်တဲ့ due dateထက်ပိုမှန်နိုင်ပြီး 20ပတ်နောက်ပိုင်းလောက်ရောက်မှသိတဲ့ ultrasound due dateကတော့ LMPရဲ့ due dateလောက်မတိကျနိုင်တော့ပါဘူး။